Video+XUSUUS:- Daawo Sidii Farmaajo loo doortay Maanta oo kale & Sanad kadib Maxaa u qabsoomay ? – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA Video+XUSUUS:- Daawo Sidii Farmaajo loo doortay Maanta oo kale & Sanad kadib Maxaa u qabsoomay ?
Video+XUSUUS:- Daawo Sidii Farmaajo loo doortay Maanta oo kale & Sanad kadib Maxaa u qabsoomay ?
Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayay maanta oo kale sannad ka hor baarlamaanka Faderaalka oo ka kooban 329 Xildhibaan u doorteen Madaxweynaha Jamhuuriyada Faderaaliga ah ee Soomaaliya, sannad buuxa ayaa laga joogaa maanta, waxaana jiray barnaamijyo waa weyn oo ay xiligaas Madaxtooyadu daaha ka rogtay in ay ka shaqeyn doonaan.
Madaxweynaha Soomaaliya oo taageero balaaran ka helay Shacabka Soomaaliyeed, ayaa balan-
qaadyadiisii qaar badan oo kamid ay yihiin kuwa aan wali waxba laga qaban
Qodobada ugu waa weyn ee Madaxweyne Farmaajo balan-qaaday in uu meesha ka saari doono waxaa kamid ahaa in layareeyo safarada dibada, laakiin taasi ma dhicin waxaana sadexdii bilood ee ugu horeysay xaafiiska uu qaatay booqashadii ugu badneyd ee Madaxweynayaashu sameyaan.
Sidaas oo kale khataraha dhanka Amaanka ayaa kobcay, inkastoo ay jiraan dabagalo lagu sameeyey weerar lasoo abaabulay oo la rumeysan yahay in lafashiliyey, haddana waxaa ku wareegsan xiisado waa weyn oo dhanka Amniga.
Sannad gudihiis Xaafiiska Madaxweynaha ayaa 3 jeer laga bedelay Agaasimaha Madaxtooyada, taas
oo ka dhigan in xil ka qaadistu ay noqoto wax iska socota oo aysan jirin wax lagu bedelay, Duqii Muqdisho ayaa shaqada laga ceyriyey todobaadkii hore si aan horeyba loo ogeyn.
3 bilood mudo ka badan ayay Taliyaasha ciidamada Nabadsugida, Sirdoonka Qaranka iyo Booliskuba laheyn hogaamiyaal rasmi ah, wasiiro katirsan Xukuumada ayaan wali la buuxin jagooyinkoodii ay iska casileen, Safiiro ayaa la ceyriyey bedelna lama sameyn dhamaantood, taas oo ka dhigan xil ka
qaadistii ugu badneyd mudo sanad gudihiisa.
Madaxweyne Farmaajo wuxuu ku guuleystay in uu xaliyo khilaafaadyo soo kala dhexgalay Xukuumada iyo dawlad gobaleedyada wuxuuna udub dhexaad u noqday sidii looga badbaadin lahaa
dalka oo mar qarka u fuulay Xasilooni Darro siyaasadeed.
Si Odaytinimo ku jirto ayuu ku dhameeyey khilaafaadka dawlad gobaleedyada qaarkood iyo dawladda
Faderaalka u dhaxeeyey oo uu heshiis kala dhex-dhigey dhinacyadii is hayey, inkastoo markii horeba dawladdiisa lagu eedaynayo in ay abuurtay xiisadahaas.
Safar qaatay 17 maalmood ayaa Farmaajo horaantii sannadkan ku tagey gobalada Sh/dhexe, Sh/Hoose, Jubbada Hoose, Mudug, Nugaal, Baay, Karkaar, Barri & Galguduud, si kale marka loo
tilmaamana wuxuu booqashadaas ku tagey dawlad gobaleedyada Puntland, Jubbaland,
HIRSHABEELLE, Galmudug & Koonfur Galbeed.
Dhiibitaankii Muwaadin Soomaaliyeed loo dhiibay dalka Itoobiya, oo aysan ilaa hadda ka hadlin Madaxtooyada Soomaaliya ayaa noqotay boog-weyn oo ku dhacday dawladda, ilaa haddana aysan jirin xal rasmi ah oo loo helay, baarlamaanka Faderaalkuna kasoo saaray qaraar rasmi ah.
Xiisada u dhaxaysa wadamada Khaliijka oo ay Madaxtooyada Soomaaliya udub-dhexaad u noqotay, gaar ahaana la rumeysan yahay in ay toos ula safatay dhinaca Qadar oo Madaxweynaha saaxiibadiisu ka xiran yihiin.
NABAD & NOLOL, waxay amaan badan ugu hayaan Shacabku dibu dhiska dalka, Miisaaniyada oo
musuqa laga ilaalinayo, Nabadda Gaalkacyo oo qeyb ay ka noqotay, Dibu dhiska ciidamada oo gaabis
ku socda iyo In doorasho qof iyo cod ah la gaarsiiyo Soomaaliya sanadka 2020-ka.
Soomaalida ayaa ku kala qeybsan in 10% laga hirgaliyey barnaamijkii Madaxweyne Farmaajo ee
NABAD Iyo NOLOL, kaas oo balan-qaadyadiisu ay ahaayeen kuwa ay adag tahay in lagu fuliyo 10-ka
sanno ee nagu soo beegan, balse taageerayaasha Madaxtooyada ayaa leh sannadaha dambe ayaa la
gaari doona barwaaqada taagan.